अस्पताल बाजुरामा अलपत्र पञ्चाको अबस्था बारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण - बडिमालिका खबर
पञ्चालाई चाडो उद्धार गर्न राष्ट्रपति कार्यलयको निर्देशन
बाजुरा–जिल्ला अस्पताल बाजुरामा पैसा अभाबमा अलपत्र ३१ बर्षिय पञ्चा कठायतको अबस्था बारे राष्ट्रपति बिद्या देबी भण्डारीको ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रपतिको ध्यान सँगै पञ्चालाई राष्ट्रपतिको कार्यलयले चाडो उद्धार गर्न निर्देशन गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यममा समचार प्रकाशित पछि राष्ट्रपतिको कार्यलय बाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारी, अस्पताल बाजुराका प्रमुख डा. प्रकाश जोशीलाई फोन मार्फत चाडो उद्धार गर्न निर्देशन गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यलय बाट फोन गरेर पञ्चाको अबस्थाको बारे जानकारी मागेको र चाडो भन्दा चाडो उद्धार गर्न निर्देशन दिएको अस्पताल प्रमुख डा. प्रकाश राज जोशीले वताए ।
जोशीका अनुसार उनलाई थप उपचारका लागि धनगढि ल्याउने तयारी भइरहेको वताएका छन् । पानि परेर मार्तडी देखी धनगढि सम्म बिभिन्न ठाँउमा सडक अबरोध रहेको छ । सडक खुल्ने बितिकै पञ्चालाई धनगढी ल्याउने र उनलाई उद्धार गर्नका लागि एम्बुलेन्स तयारी अबस्थामा रहेको जोशीले वताएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले भने पञ्चा पैसा अभाबमा अलपत्र रहेको सञ्चारमाध्यममा आएपछि राष्ट्रपति कार्यलय बाट फोन आएको वताएका छन् । उनलाई उपचारका लागि धनगढि लिनका लागि सम्पुणर् व्यबस्थापन भइसकेको बाटो खुल्ने बितिकै पठाउने अधिकारीले वताएका छन् ।
बडिमालिका खबर लगायत सञ्चारमाध्यममा पञ्चा पैसा अभाबमा अलपत्र रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । बेहोस अबस्थामा रहेकि पञ्चालाइ जिल्ला अस्पताल बाजुराले रिफर गरेको भएपनि पैसा नहुदा अस्पतालको शैयामा छट्पटाइरहेकी छन् । अहिले होसमा आएपनि उनलाई आफु कहाँ र के भइरहेको बारे जानकारी नभएको के बोलिरहेको छु कुनै जानकारी नभएको अस्पतालले वताएको छ । बुढिनन्दा नगरपालिका नगरप्रमुख पदम गिरिले भने एम्बुलेन्सकाे भाडा पालिकाले तिर्ने वताए ।
२८ गते दशैको दिनमा राम्रै थियो, राम्रो सँग दशै मनायौ, सामान्य ज्वरो र टाउको दुख्ने समस्या त कोभिडको खोप लगाइसकेपछि भइरहेको थियो । २९ बिहान त एकाएक बेहोस भएको आफन्तले वताएका छन् ।